Maamulka Galmudug oo Tababar u furtay Ciidamo Cusub | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maamulka Galmudug oo Tababar u furtay Ciidamo Cusub
Maamulka Galmudug oo Tababar u furtay Ciidamo Cusub
Gelinsoor (Halqaran.com) – Wasiirka Amniga gudaha ee maamulka Galmudug, Axmed Macalin Fiqi ayaa tababar u furay askar ka mid noqoneyso Ciidamada Daraawiishta Galmudug, kuwaas oo lagu xareeyey xerada Dhaan Karoone ee duleedka degmada Gelinsoor.
Wasiir Fiqi, ayaa sheegay in askartaan lasiin doono tabar dhowr bilood ah loona carbinayo sidii ay uga mid noqon lahaayeen aasaaska daraawiishta dowlad goboleedka.
Ciidamadaan ayaa horay ugu xareysnaa xerada indhoqaris ee duleedka deegaanka Docol ee gobolka Mudug, waxaana loo soo wareejiyey xeradaan si ay u qaataan tababarkii u haray.
Wasiirka Amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo la hadlay Ciidamada ayaa kula dardaarmay inay si wanaagsan uga faa,iideystaan tababarka Ciidamada la siinaayo.
Muddooyinkii dambe waxaa Galmudug ka socday uruurinta hubka ay haystaan maleeshiyaadka iyo In maleeshiyaadka lagu biiriyo Ciidamada Maamulka uu yeelanaayo.
Tababar ciidamo cusub